Haddaan dhergo ma tago!!!!!W/Q Maxamed Sidiiq Dhame – somalilandtoday.com
Haddaan dhergo ma tago!!!!!W/Q Maxamed Sidiiq Dhame
Ninbaa soo galay hudheel wuxuu dalbaday waslad Xagalo ah, kolkuu kuruskii qawlallada ka tufay ee uu dhergay, labadii gacmood iyo afkoo hareedan intuu soo dhaqday ayuu maqlkii isi soo quturay, la’ye lacagta intaasaad qabtaaye bixi, intuu laba indhood ood mooddo kabbo dhiiga galka ka saaray ayuu yidhi lacag ma hayo. Maqalhayii intuu meheradiisa u tudhay ayuu ku yidhi lacagna ha bixine adeer iska bax, intuu gafuurka kor u taagay oo uu faraha indhaha ka geshay ayuu yidhi haddaan dhergo maba tago!
Ninkaa waxa ka dhigan golaha wakiillada ee afar iyo tobanka sano aynu biilinaynay ee cashuurteenna carruuraha ku korsaday tagimaayaan. Kuraastaa ay ku fadhiyaan waxaan hadimo iyo hagardaamo ahayn qaranku kuma qabo, shaqada ay qabteen mid manfac leh oo la majeeran doono maaha, tagimaayaan oo mushaharka ka tagimaayaan illaa shacabkii kuraasta lahaa ka tashadaan oo kuraasta qasab lagaga soo jiido. Waa axmaq aan iimaan iyo ummadnimo lahayn waxaan ahayn sanqadha doollarka ma maqlaan.
Garaad cay iyo liitinimay innagu tahay in markii shanaad ay u shanlaysanayaan kordhin, dhaqankaasi waa mid ceeb ku noqday dawladnimadeena boogna innagu ah, in gole xilkii loo dhaarshay ku fashilmay oo aan manfac inoo lahayn kolba muddada loo jadiidiyo. Muddo-xileed xadidan ayaynu dooranay oo ay ahaayeen wakiillo inna metela illaa manta xeerkii lagu dooran lahaa may hirgelin shuruuc kale ha joogeene. Ummadaha dunda ee damiirkoodu noolyahay sida aynu u xisaabtanno uma dhaqmaan, danbaa midaysa innagana reernimo iyo qabyaaladba inna midaysa.